Nepal Galleries: March 2017
सत्य युगको कुरो हो, एक राजपरिवारमा राजा सत्यवन्तका सात वटी छोरीहरु थियो ! एवम् ढंगले छोरीहरु हुर्कदै आए । ६ जना छोरीहरुलाई सम्भ्रान्त राजपरिवार राजकुमारहरुसँग विवाह गरी दिए ! एक जना कान्छी छोरी सत्यकेशरीलाई चाहिं गरीब असहाय अपाङ्ग कुष्टरोगीसँग विवाह गरी दिए ।
६ जनाको हकमा दाइजो पनि अनिगिन्ती दिए । तर सत्य केशरीको हकमा चाहिं केही पनि दिएन । कान्छी छोरी दयामाया बाहेक सहयोग केही पनि नपाएका स्वच्छ हृदय र दृढ विश्वास अनि आमावुवा प्रति अपार निष्ठा भएको कारणले वुवाआमाको वचनलाई स्वीकारे । आफ्नो कर्यमा लेखि आए अनुुसार सिरोधरी गरी रोगी पतिको घरमा गई घरजम गर्न लागे । बाँच्नको लागि आफ्नो घर छाडी भिख माग्दै जाने क्रममा एक दिन श्री सपनतिर्थ मन्दिर परिसर सँगै सिद्धिपोखरी नजिकैको पाटीमा पुगेछ । आफ्ना अपाङ्गता भएको पतिलाई त्यसै पाटीमा छोडी आफु शहरमा गई भिख माग्न गए ।
त्यही समयमा नजिकैको सिद्धिपोखरीमा गाई वस्तु चराउन आएका गोठालाहरुले किरा फ्ट्याग्राहरु खोेजेर ल्याउँदै खुट्टा पखेटा छुट्याँउदै त्यस पोखरीमा फाल्दै र एक छिनमै ति किरा फट्याग्रा जस्ताको तस्तै संवल भै भुरुरुर उडेर जाने एवंम् तरिकाले ति प्रकृयाहरु चलिरहयो । कुष्ठरोगी पतिले निकै वेर त्यो दृश्य हेरिरहे र केही समय पछि आफ्नो शरीर पनि अपाङ्ग र कुष्टरोग लागिरहेकाले म पनि त्यस पोखरीमा गई डुब्न पाएँ मेरो पनि शरीर स्वस्थ र सवलाङ्ग पो हुने हो कि भनेर निकै सोच विचार गरे ।
धेरै सोच विचार पछि त्यही रमाइरहेका गोठालाहरुलाई बोलाई आदरताकासाथ मलाई पनि त्यस पोखरीमा लगि डुबाइदिनोस म पनि किराहरु जस्तै स्वस्थ र सपाङ्ग पो हुने हो कि भनी अनुनय विनय गरे ! तर कसैले पनि त्यस कार्य गर्न मानेन र आँट पनि गरेन ! केही भयो भने के गर्ने ? हामीलाई दोष लाग्छ त्यस कारणले ति गोठालाहरुले मानेन ।
फलस्वरुप आफैले आफु बसेको पाटीवाट गुल्टिदै गुल्टिदै त्यस पोखरी नजीक पुगी आफुले लगाएको वस्त्र फुकाली त्यस सिद्धिपोखरीमा हाम फाल्यो । केहि वेर पछि आफ्ना अपाङ्ग भएको शरीर सवलाङ्गको रुपमा परिणत भयो र अचम्मित र आश्चर्य मानी खुसीले पहिलेकै ठाउँमा आई वस्त्र लगाइ त्यही पाटीमा वसे । त्यो दृष्य देखेर त्यहाँ खेलिरहेका गोठालाहरुले हल्ली खल्ली मच्चायो ! सबै तिरवाट मानिसहरु जम्मा भएर हेर्न आउनेको ताँती लाग्यो ।
त्यसै समयमा माग्न गएका सत्यकेशरी पनि आइपुगे मान्छेको घुइचो वीचमा यताउता आफ्ना पतिलाई खोज्छन् भेटाउन सकेन ! त्यही ठाउँमा सवलाङ्ग निरोगी मान्छे वसेका थिए । त्यही अपाङ्ग कुष्टरोग लागेका मान्छे म नै हु तिम्रै पति हु भनेर चिनाउन खोजे, तै पनि पत्याएन ! पत्याउनु पनि कसरी, राजकुमारीले मलाई छलछाम गर्न लागे, मेरो ईज्जत र अस्तित्व लुट्न लागे, मेरो पति तिमी कुनै हालतमा हैन भने पछि ति सत्यकेशरीको पतिले आफुले भोगेको कुरा र देख्ने मानिसहरुको मुखबाट सबै सव–विस्तार सुनाए पछि वल्ल विश्वास गरे ।
सत्य केशरी र अपाङ्ग कुष्ट रोगी दुवै जना खुसी भए र रमाए ! एक आपसमा भेलाभएका मानिसहरुसँग पनि खुसी साटासाट गरे त्यस सिद्धिपोखरीका वारेमा व्यापक छलफल गरे ।
श्रोत : न्युजअफटोखा.कम
By Maheswor Maharjan at March 28, 2017 No comments:
Labels: काठमाडौं, कुष्ठरोग, टोखा, बैसाख १, सत्यकेशरी, सत्यवन्त, सपन तिर्थ, सिद्धिपोखरी
किंवदन्ती अनुसार सिमसिम राजाको एउटा घोडाको सुसारे पाटन ओल्खुटोलमा बस्ने ज्यापु थियो। एक दिन राजा सँधैजसो घुम्नका लागि घोडा लिन गएको बेला ज्यापु थाकेर आराम गरिरहेको रहेछ। तर, राजाले त्यो सुतिरहेको ज्यापुसँगै पाँचवटा टाउको भएको नागले संरक्षण दिइरहेको अचम्मको दृश्य देख्दा केही नभनी हिँडेरै राजदरबार फर्किए।
यता ज्यापु झसङ्ग भई निद्राबाट ब्युँझदा राजा आएर पनि फर्किसकेको थाहा पायो। डरले ज्यापु घोडा लिई राजदरबार गई मैले गल्ती गरेँ, गल्ती भएकोमा क्षमा पाऊँ भनी राजाको पाउ पर्न लाग्दा उल्टै राजाले मलाई माफ गर, तिमी भगवानको अवतारलाई मैले घोडाको सुसारे बनाउन पुगेँ भनी आफू आएको बेला देखेको दृश्यबारे बताए ।
त्यसपछि राजाले उसलाई त्यही घोडा चढाई फूलमाला पहिर्‍याई नगर परिक्रमा गराए। यही घटनाको स्मरण गर्दै पाटनमा एकल घोडेजात्रा मनाउने भनी प्रत्येक वर्ष चिल्लागा औँसीको दिन यो जात्रा मनाउने चलन रहेको हो ।
श्रोत : पहिलोपोष्टबाट http://www.pahilopost.com/content/-30004.html
By Maheswor Maharjan at March 27, 2017 No comments:
Labels: घोडाजात्रा, ज्यापु, पाँचवटा टाउको भएको नाग, पाटन, सिमसिमे राजा
By Maheswor Maharjan at March 26, 2017 No comments:
प्राचिन समयमा बौद्धमार्गीहरुको संख्या बढी थियो । धर्मकै कारण अधिकांश मानिसहरुले बैबाहिक जीवन त्यागेर साधु जीवन बिताउन थाले । यस्तो क्रम बढेपछी त्यतिखेरका हिन्दु राजाहरुले उनीहरुलाई सांसारिक जीवनमा ल्याउनको लागि बिभिन्न उपायहरु रच्न थाले । धर्म त्यागेर बौद्धमार्गी बन्नेको संख्या बढेको र बैबाहिक जीवन र यौन जीवनलाई त्यति ख्याल नगर्नेहरु बढ्न थालेपछि जनशंख्या घट्न थालेपछी त्यतिखेर मन्दिरहरुमा त्यस्ता यौनक्रिडाका मुर्तिहरु बनाएर दैनिक मानिसहरुलाई यौन क्रिडामा सक्रिय बनाउनको लागि मन्दिरहरुमा अश्लिल मुर्ति बनाउन थालियो ।
By Maheswor Maharjan at March 23, 2017 No comments:
- कृष्ण धारावासीले लेखेको टुडाल पुस्तकबाट ।
Labels: Erotic Art, Erotic Sculpture, Kathmandu, Nepal, काठमाडौं, टुडाल, नेपाल, मन्दिर, यौन वास्तुकला
राजा गुणकामदेवाका पालामा लडाईमा जानुअघि सेनाहरुले तोपलाई कन्या कुमारीको बलि दिन थालेछन । एक कन्याको बलि दिएर उक्त तोपबाट लडिएको लडाई जितिन्छ भन्ने एक तान्त्रिकको सल्लाहबाट शुरु भएको त्यो बलिप्रथाले कुमारी केटीहरुमा सारै ठुलो आतंक फैलियो ।
कुमारी रहनु अत्योनी हुनु भनेको ज्यान जानु सरह भएपछि बलिमा पर्ने डरले सानै उमेरमा बिहे गरि दिने तथा कुमारी केटीहरुलाई यौनकार्यमा
संलग्न गराउन थालिएछ ।
अभिभावकहरुले नै छोरीको कुमारीत्व च्युत गराउने वातावरण बनाइदिन थालेपछि औपचारिक रुपमै भित्रभित्रै देशैभरि यौनप्रथा बाक्लिएर गएछ । कुमारीत्व च्युत गराउन छुट गरिएको यौनप्रथा बाक्लिएर गएछ । कुमारीत्व च्युत गराउन छुट गरिएको यौनप्रथा बिस्तारै अराजक हुँदै गएर विवाहित महिलाहरु समेत पुरुषसँग अनेकौं ‘यौनासनारुढ’ हुन थालेछन ।
समाजमा फैलिएको त्यो नाङगोपनलाई कलाकारहरुले चित्र र मूर्तीहरुमा कप्न थालेछन र बिस्तारै त्यसलाई सार्वजनिक मन्दिर र टुडालहरुमा सजाउन थाले ।
By Maheswor Maharjan at March 23, 2017 1 comment:
महिन्द्र मल्ल भन्ने बितिक्कै जनताले खाए / खाएन, जनताको घरको धुरीबाट धुँवा आयो आएन भन्दै चिन्ता लिने राजाको रुपमा चिनिन्छ । यिनै महिन्द्र मल्लका दुई श्रीमतीबाट दुइ छोराहरु सदाशिव मल्ल र शिव सिंग मल्ल जन्मे ! महिन्द्र मल्लको मृत्युपछि सदाशिव मल्ल राजगद्दीममा बसे ।
जनताका प्रिय राजा महिन्द्र मल्लका छोरा भएर के गर्नु, सदाशिव मल्ल नैतिक रुपमा एकदम भ्रष्ट र अभिजात बर्गको राजा थिए । उनि आफ्ना घोडाहरुलाई सर्वसाधारण जनताको खेतबारीमा छोड्न लगाएर बालीहरु नष्ट गर्ने गराउने गर्दथे । जवान केटीहरुलाई जवर्जस्ती यौन शोषण गर्ने र नैतिकता भंग गराउने गर्दथे । सर्वसाधारण जनताहरु उनको अन्याय बिरुद्ध १ सब्द पनि बोल्न सक्दैनथ्यो ! आम जनताहरु यिनको क्रुरताको बदला लिन पर्खी रहेका थिए ।
एकदिन, जब सदाशिव मल्ल मनोहरा खोलाको किनारमा एक्लै हिडिरहेका थिए, उसलाई सर्वसाधारण जनताले समाते र नराम्ररी चुट्नु चुटे । अन्तत: उनलाई राजाबाट हटाइए र शहरभन्दा धेरै पर लुकाइए । उनलाई भक्तपुरमा एक कैदी बनाई थुनेर राखिए ! पछि, उनि भक्तपुरबाट अत्तोपत्तो नहुने गरि भागे । भक्तपुरमा यिनलाई थुनेर राखेको त्यो जेल / ठाउँलाई अहिले पनि "सदाशिव चोक" भनेर चिनिन्छ ।
यो फोटो यिनै सदाशिव चोकभित्र छिर्ने गेटमाथि कुँदिएको कलात्मक मुर्ति हो ।
- History of Nepal, Daniel Wright बाट साभार ।
By Maheswor Maharjan at March 22, 2017 No comments:
भीमसेन देया लज खङ्गलो वानला ल्यासे ?
बिस्युं वाने म्वायेक स्व: झायाला ?
भीमसेनको लिङ्गले मन लोभियो कि ?
भाग्नु नपर्ने गरी हेर्न आउनु भयो कि ?
भक्तपुरको यौन पर्वको रुपमा मनाइने होलीको नेवारी गीत !!
भक्तपुरको दत्तात्रय मन्दिरसँगै रहेको भैरव मन्दिरमा रहेको लिंगको आकृति भएको काठ र रातो कपडाको योनी जुधाएर होलीको सुरुवात गरिन्छ । फागुन शुक्ल अष्टमीको दिन भीमसेन मन्दिरमा राखिएको लिंग अर्थात् लगलाई टोल-टोलमा घुमाएर पुनः मन्दिरको पाटीमा राखिन्छ । टोल-टोलमा रहेका पसलै पिच्छे घुमाएर पूजा गरी पाटीमा झुन्ड्याइन्छ । काठबाट बनेको दुई हात लामो लिंगको करिब ३० इन्च मोटाइलाई भीमसेनको लिंग र कपडाबाट बनाएको प्वाललाई द्रौपतीको योनीको सांकेतिक रूपमा लिने गरिन्छ ।
भीमसेन मन्दिरमा भीमसेनको लिङ्ग र द्रौपतीको योनीको प्रतीक काष्ठकलालाई झुन्ड्याएर यौन समागमका रुपमा एक सातासम्म प्रदर्शनमा राखेर यस दिन खोलामा लगेर पखालेपछि होली पर्व विधिवत् रुपमा विसर्जन भएको मानिन्छ ।
काठबाट निर्मित भीमसेनको लिङ्गलाई फागुन शुक्ल अष्टमीको दिन बिहान दुई जनाले काँधमा बोकेर भक्तपुरको इनाचो, बाचुटोल, जेला, जगाती, बह्मायणी, च्यामासिंह हुँदै, तचपालस्थित दत्तात्रय मन्दिर वरिपरि रहेको घर, पसलपिच्छे दर्शन एवम् पूजा गरी साँझ मन्दिरको पाटीमा झुन्ड्याउने गरिन्छ जसलाई "चीर स्वायगू" भनिन्छ । चीर स्वायगू अर्थात् लिङ्ग घुमाएपछि फागु सुरु हुने परम्परा छ । घुमाएको लिङ्गलाई स्थानीयवासीले ढोग्ने र दान दक्षिणा दिने परम्परा छ । यसो गर्दा व्यापार फस्टाउने विश्वास रहेको पाइन्छ । बजार घुमाएपछि भीमसेन मन्दिरमा ल्याएको लिङ्ग र योनी आकारको प्वाल भएको रातो कपडा समेत भीमसेनको मन्दिरमा झुन्ड्याइन्छ । झुन्ड्याएको लिङ्ग हल्लाउँदा योनी आकारको कपडाको प्वालभित्र छिर्ने गर्दछ । यसलाई विकृतिका रुपमा नभई सांस्कृतिक महत्वको मान्दै भीमसेन र द्रौपतीको यौन समागमका रुपमा संरक्षण गरिँदै आएको पाइन्छ ।
दक्षिण एसियामै कतै कृष्णसँग र कतै प्रल्हादसँग सम्बन्धित रहने होली पर्व भक्तपुरमा चाहिं भीमसेनसँग सम्बन्धित रहेको पाइन्छ । चीर स्वायगू अर्थात् लिङ्ग झुन्ड्याएपछि यहाँका नेवार समुदाय भीमसेन मन्दिरमा गई गुठी भोज खाने प्रचलनसमेत रहिआएको छ । फागु पूर्णिमाको दिन आज मन्दिरबाट लिङ्ग निकाली एक व्यक्तिले बोकेर ब्रह्मायणी मन्दिरस्थित खोलामा लगेर पखाल्ने र पुनः मन्दिरमा राखेपछि विधिवत् रुपमा होली समापन हुने गर्दछ । छोरा जन्मन्छ भन्ने विश्वासका आधारमा लिङ्ग बोक्न चाहनेकोे प्रतिस्पर्धा चल्ने गर्दछ ।
भक्तपुरको बिस्केट जात्रा : भैरब - भद्रकाली "द्य: ल्वाकेगु" जात्रा
भक्तपुरमा बैसाख १ गते बिस्केट जात्राको समयमा भैरब - भद्रकाली "द्य: ल्वाकेगु" अर्थात रथ - रथ जुढाई कार्यक्रम सम्पन्न गरिन्छ ।
भैरव रथमा आकाश भैरवको शिर–मूर्ति प्रतिष्ठापन गरिएको हुन्छ। भद्रकाली-रथमा भद्र स्वभावलाई आचरण बनाइएकी कालीमाईको मूर्ति राखिएको हुन्छ। काली उजन्ड स्वभावकी मातृ लिङ्गी हुन्। जरङ्ग जङ्गिने स्वभावलाई प्रतिबिम्वित गर्ने नारीतत्वलाई कालीमाईले प्रतिनिधित्व गर्छन् । त्यस्तो जरङ्गिने आचरणलाई साम्य, शालीन पार्न भद्रताको चाहना हुन्छ । भैरवसित उग्रचण्डी बनेर भद्रकाली कसरी बन्न सकिएला है ?
यिनै उग्र भद्रकालीलाई नियन्त्रण गर्न भैरब - भद्रकालीको "द्य: ल्वागेकु" जात्रा यौन समागमनको प्रतिक स्वरूपमा मनाइन्छ ।
इन्द्रजात्राको अघिल्लो दिन ।
कथा अनुसार एकदिन राजा योगनरेन्द्र मल्ल च्यासलबाट जाँदै गर्दा इनार नजिकै एक व्यञ्जनकार युवती नुहाउँदै गरेको देख्छन् । औधी सुन्दरी युवती देखेर राजा मुग्ध हुन्छन् ! राजाले बिहे गरेर दोस्रो रानी बनाउँछन् । जेठी रानीलाई असैह्य हुन्छ । अनि जेठी रानीले च्यासलका अवालहरु (कुम्हाले)लाई लगाएर व्यञ्जनकार रानीको बेइज्जत गर्न सेतो पर्दामा विभिन्न यौन आसनहरु देखाई झ्याल्चा देखाउन लगाउँछिन् । पाटन दरबारमा योगनरेन्द्र मल्ल र उनकी दुई रानीको शालिक अझै छ ।
मणि लोहनीको कथा अनुसार चाहिं सिद्धिनरसिंह मल्ल ललितपुरका राजा भएका बेला पाटन दरबारको वरिपरि धेरै कृषक थिए । वर्षाको काम सकिएपछि स्थानीय बासिन्दा चोकचोकमा बत्ती काटेर बस्थे । चोकमा बसेकी सुन्दर युवती देख्दा घुम्दै आएका राजा मोहित भए । उनको सुन्दरतामा लठ्ठिए । युवती व्यञ्जनकार समुदायकी थिइन् । युवतीबाट लोभिएका राजा नियमितजसो उनकै घर जान थाले । दरबारमा रानी छँदाछँदै अर्की रानी ल्याउने कुरै भएन। हरेक दिन युवतीकै घर गएर मिठामिठा कुरा गरेर फकाउन थाले । बिस्तारै मायाजालमा फसाएर यौन क्रियाकलाप गर्न थाले ।
राजा हरेक दिन युवती भेट्न जान्छन् भन्ने हल्ला जताततै फैलियो । जनतालाई एक किसिमको त्रास पनि भयो । राम्री केटी देखेपछि राजाले नछोडने रै’छन् भन्ने भयो। जनताले चेलीबेटी असुरक्षित भएको महसुस गरे ! कि बिहे गरेर दरबारमा भित्राउनु, नभए युवतीलाई भेट्न जनताको घरमा नआउनू’ भन्ने आवाज उठ्यो । त्यतिबेला राजाको प्रत्यक्ष विरोध गर्ने अवस्था थिएन । अप्रत्यक्ष रूपमा राजाको सो अनैतिक गतिविधिको विरोध जनाउन उनका क्रियाकलापलाई पर्दामा अभिनयमार्फत यौनलिला देखाउन सुरु गरियो !
देखाइने दृश्यहरु क्रमस:
पहिलो दृश्यमा दुई पात्र मिलेर पूजा गर्छन्, योमरी खान्छन् ।
दोस्रो चरणमा युवतीले बत्ती काटेको दृश्य हुन्छ। युवतीले झुल्दै बत्ती कात्दा युवकले झस्काइरहन्छ ।
तेस्रोमा युवकले युवतीलाई सम्भोगका लागि आग्रह गर्छ। युवती सहमत नहुँदा नहुँदै पनि पछि यौन क्रियाकलाप हुन्छ।
चौथो चरणमा युवतीले नै आग्रह गर्छे । युवक मान्दैन । पछि यौन लीला हुन्छ। पाँचौमा युवकले आग्रह गर्छ । युवती मन्जुरी जनाउँछे ।
अन्तिममा फेरि पूजा गरेपछि झ्याल्चा सकिन्छ।
(माइसंसार.कम बाट साभार)
By Maheswor Maharjan at March 21, 20172comments:
किम्बदन्ती अनुसार परापूर्वकालमा भक्तपुरमा एक प्रतापी र अद्भूत सुन्दरी राजकुमारी थिइन् । ती राजकुमारीलाई बिहे गरे राजगद्धी पाइने भएपछि धेरै राजाले तिनीसँग बिहे गरे तर बिहेकै रात राजकुमार मर्ने गर्दथ्यो । राजाले आफ्नो सयन कक्षबाट हरेक बिहान शव उठाई मसानघाटसम्म पुर्याउने मलामी गुठी नै स्थापना गरेका थिए ।
अन्तमा एक बुद्धिमानी राजकुमारले ती राजकुमारीसँग बिहे गरे । राति राजकुमारी निदाएपछि उनको नाकको प्वालबाट दुईवटा स–साना नाग नागिनी निस्केर अजिङ्गरको रूपधारण गरी राजकुमारलाई डस्न लाग्दा राजकुमारले आफ्नो खड्गले काटेर दुई टुक्रा पारिदिए । ती नागनागिनीले प्राण त्याग गर्ने बेलामा अब हामी दुवै एकै ठाउँमा मर्न लाग्यौँ, हामी प्राण त्याग गरेर गएपछि हाम्रो पुरुषार्थ देखाउन सबैले देख्ने गरी जात्रा चलाइदिनु भनेर अनुरोध गरे ।
यसरी अजिङ्गरको स्वरुप हुने नागनागिनी मारिएको खुसियालीमा यो जात्रा मनाउन थालिएको भनाइ छ । नागनागिनीको अन्तिम इच्छाअनुसार ६० हात लामोे लिङ्गो ल्योसिंखेलमा ठड्याएर एकजोडी विश्व ध्वजा राख्ने गरिन्छ । लिङ्गोमा आठवटा डोरी रहेको हुन्छ, जसमा अष्टमातृका गण अङ्कित हुन्छ ।
नागनागिनीसँग जोडिएको यो जात्रालाई नेवारी भाषामा बिःसित (नाग मर्यो) , बीय जात्रा (नागको जात्रा), वीःस्यात (नाग मारियो) हुँदै पछि विश्वजात्रा भई अपभ्रंश हुँदै बिस्केट जात्रा हुन गएको स्थानीय बूढापाका बताउँछन् ।
९ दिन ८ रातसम्म चल्ने (हरेक बर्ष चैत्र २७ देखि नयाँ बर्षको बैसाख ५ सम्म) चल्ने यो जात्रा नेपाल सम्वत् २६८मा राजा जगतज्योति मल्लले विशेषरूपमा मनाउने व्यवस्था गरेको थियो भने नेपाल सम्वत् ८२७ मा राजा भूपतिन्द्र मल्लले अझ व्यवस्थित गरी आठरात र नौ दिन मनाउने प्रचलन बसाएको थियो ।
By Maheswor Maharjan at March 21, 2017 No comments:
भद्रकाली मन्दिर, पोखरा
१९०१ मा गणेश मन्दिर स्थापना भएको थियो । गणेश मन्दिरको पूजाआजामा सक्रिय स्थानीय ढेवाजु परिवारका सदस्यलाई सपनामा भद्रकाली आएर मन्दिर स्थापनाको आदेश दिएको थिए ।
'म पनि यहीँ छु, गणेशको मात्रै पूजा हुन्छ, मेरो हुँदैन भनेर देवीले सपनामा भन्नुभएछ,' रे !
जंगलमा खोज्दा कालो ढुंगा भेटियो र उहाँलाई नै देवी मानियो ।
पछि काठमाडौंबाट अष्ठभुजा भएको प्रतिमा ल्याएर पूजा हुन थाल्यो रे !
सत्ययुगमा विश्व ब्रह्माण्ड नष्ट गर्न आएको महाप्रलयबाट बचाउन
विष्णुले बगलाको तपस्या गर्दा
माता बगलामुखी उत्पन्न भई विश्वलाई बचाएको बताइन्छ ।
समुद्र मन्थनपछि हलाहल विष पिएका शिवले पनि बगला माँको आराधना गरेको विश्वास गरिन्छ ।
फोटो : उदय चरण श्रेष्ठज्युको फेसबुकबाट
By Maheswor Maharjan at March 21, 2017 1 comment:
प्राय: हाम्रा परम्परागत भोज भतेरहरुमा मसालेदार खानाको परिकारहरु खुवाई भोजन सुरु गरिन्छ र अन्तत: मिठाइ हरु खुवाई समापन गरिन्छ । बाजे बराजुहरुको पाला देखि चली आएको यो परम्परा अनुसार मसालेदार खानाले पाचनदार रस तथा एसिडहरु उत्पादन गर्दछ जसले खाएको खानाहरु आरामले पचाउन सहयोग पुर्याउँछ । भोजनको अन्त्यमा दिइने गुलियो मिठाइ तथा कार्बोहाइड्रेटले पाचन प्रकिया सुचारु गर्न गराउन उत्प्रेरित गर्दछ । त्यसैले मिठाइ जहिले पनि खानाको अन्त्यमा दिनु उचित हुन्छ ।
प्राय: प्राचिन मन्दिरहरु उत्तर - दक्षिण ध्रुबबाट सृजित चुम्वकीय र विद्युतीय तरङ्गहरु यथेष्ट मात्रामा प्रवाहित हुने गरि बनाइएको हुन्छ । मन्दिरभित्र मुर्ति राखिएको मुख्य केन्द्र जसलाई गर्भगृह वा मूलस्थान भनिन्छ । सामान्यत: मुर्ति राखी सकेपछि मात्र मन्दिर स्थापना गरिन्छ । मुर्ति प्रतिस्थापन गर्दा मुर्तिको गर्भगृहमा बैदिक श्लोक सहित तामाका पाताहरु राखिएको हुन्छ जसले पृथ्वीको चुम्वकीय तरङ्गहरु एकत्रित संकलन गरी मन्दिर वरपर चुम्वकीय तरंगहरु प्रसारण गर्दछ । जसको कारण आम मानिसहरु मन्दिरलाई घडीको सुइ घुम्ने सुल्टो दिशाबाट घुम्दा ती चुम्वकीय तरङ्गहरु मानिसको शरीरले ग्रहण गर्छ । यो एक अदृश्य र ढिला प्रवाह हुने प्रक्रिया हो । यसर्थ नियमित रुपमा मन्दिरहरुमा सुल्टो दिशाबाट घुम्दा शरीरले यथेष्ट सकारात्मक उर्जा प्राप्त हुन्छ । बैज्ञानिक कथन अनुसार स्वस्थ जीवनको लागि सकारात्मक उर्जाहरु अत्यावश्यक हुन्छन् ।
- प्रथम पटक प्रकाशित : हाम्राकुरा.कम
द्वापर युगमा कृष्णको अवतार पछि एकदिन महादेव कृष्णलाई भेट्न पुगेछ । महादेवले कृष्णको चरित्र बुझ्न भनेछ “हे कृष्ण, हजुरसंग १६०० गोपिनीहरु छन्, त्यस मध्येबाट मलाई पनि एक दुइ जना दिनुहोस् ।” महादेवको यस्तो कुरा सुनेर कृष्णले मुसुमुस हाँस्दै भनेछ “म नभएको कोठामा बस्ने मेरो श्रीमतीलाई लैजानुस्” । कृष्णले यसो भनेपछि महादेव कृष्ण नभएको कोठाहरु खोज्दै हिड्न थाले । आश्यर्च, जुनसुकै कोठामा छिरे पनि कृष्णलाई देखेर लज्जित हुँदै महादेव पार्वतीकोमा गई सबै बेलिबिस्तार लगाए ।
महादेवको कुरा सुनेर पार्वतीले पनि महादेवको चरित्र थाहा पाउन ६४ योगिनीहरुको रुप धारण गरे । सबै योगिनीहरु अत्ति कामातुर हुँदै एकै आवाजमा महादेवसंग यौन समागमन गर्न लालसा ब्यक्त गरे । यो देखेर महादेव त्यहाँबाट भागे । महादेव जता गए पनि योगिनिहरु आफ्नो पछि पछि आइरहेको देखेर महादेव पनौतीको त्रिबेणीको गुप्त ठाउँमा लुकेर बसे ।
यता यो सबै कुराहरु विष्णु भगवानले हेरिरहेको थियो । बिष्णु महादेवको कानमा गएर हजुर किन लुकेर बस्नु भएको, उन्मुक्त रुप लिएर बाहिर आउन सक्नु हुन्न ? भनेर कान फुके ! नभन्दै महादेवले भयानक उन्मुक्त भैरबको रुप लिएर बाहिर निस्के । यसरी उन्मुक्त भैरबको भयानक रुप देखेर ६४ योगिनीहरु मध्य १ जना भद्रकाली भएर त्यताबाट भागे । उन्मुक्त भैरब पनि भद्रकालीलाई पछ्याउंदै गए । यसरी आफुलाई लखेट्दै आएको देखेर भद्रकाली रोशी खोलाको छेउ छेउ हुँदै नगर पसे । भाग्दै जाने क्रममा भद्रकाली त्रिवेणीको कोलाछे टोल, दुमाग: टोल, वलाछे टोल हुँदै लम्पसार पर्दै सुति दिए, फेरी फर्केर लायकुको गणेशको अगाडी लम्पसार परि सुति दिए । यता त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिर अगाडी पुग्दा नपुग्दै उन्मुक्त भैरबले समाते र भद्रकालीसंग सहबास गरे ! दुबैको सहमतिमा ३ पटक पुन: सहबास गरे । सहबास पछि भद्रकाली अत्ति खुसि हुँदै “हे प्रभु, हजुरको उन्मुक्त रुप हेरी सकें, अब हजुरको साक्षात शिव रुप लिएर सहबास गर्नु पर्यो भनेपछि महादेवले पुन ४ पटक सम्म सहबास गरे र दुवै सन्तुष्ट भए ।
महादेव त्रिवेणीमा लुकेर बसेको बेला भद्रकाली मात्र भागेकोले बाँकी सबै योगिनीहरु एकै ब्रम्हायानी स्वरुपमा सिद्ध भए । जेष्ठ पुर्णिमाको मध्यरातमा घटेको यस घटनाको मुख्य साक्षी यिनै ब्रम्हायनी थियो ।
यसै घटनामा आधारित यस पनौती जात्रामा जेष्ठ पुर्णिमाको दिन महादेव, भैरब, भद्रकाली, गणेश र ब्रम्हायानीको प्रतिमा खतमा राखी जात्रा चलाउने चलन रही आएको छ ।
पौराणिक किम्बदन्ती तथा शिलालेखमा उल्लेख भएअनुसार लिच्छवी राजा आनन्ददेवले भक्तपुर शहरलाई नवदुर्गा भवानीमार्फत राजधानी शहरको रूपमा प्रतिष्ठा गर्दा सदाकाल शत्रु, विपद्, दैबीप्रकोप आदि अनिष्टकारी तत्वबाट रक्षा गर्न तथा सुख, शान्ति एवं समृद्धि प्रदान गर्ने बनामाला जातिको नेतृत्वमा तान्त्रिक देवदेवीहरूका साथ नवदुर्गा गणको “ङालाकेगु नाच” प्रचलनमा ल्याएका थिए । १६ औँ शताब्दीदेखि प्रचलनमा आएको यो नाच माघे संक्रान्तिको रात तान्त्रिक विधिद्वारा अष्टमात्रिका देवीदेवताहरूलाई आव्हान गरी श्वेत भैरवले सूर्यमढीको वाकुपति नारायणको मन्दिरमा विधिवत् पूजा अर्चना गरेपछि यो जात्रा प्रारम्भ हुन्छ र भोलिपल्टदेखि सूर्यमढी टोलबाट पहिलो सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन गरिन्छ र क्रमशः भक्तपुरका २१ ठाउँहरूका साथसाथै भक्तपुर बाहिर देउपाटन, ठिमी, नगदेश, बोडे, तुप्चा, मुलाकेचा, ग्रेखा, जयबागेश्वरी, साँखु, बनेपा, धुलिखेल, पनौती, साँगा, श्रीखण्डपुर, खम्पु, ढुर्खक, बुढानीलकण्ठ, दोलखा, गोकर्णमा पनि प्रदर्शन गर्ने गरिन्छ ।
विभिन्न कालखण्डमा विविध कारणले यो नाच रोकिने र फेरी सञ्चालन हुने गरेको पाइन्छ ! राजा भुवन मल्लको पालामा नेपाल सम्वत् ६३३ मा देशमा अनिकाल पर्दा सहकाल ल्याउन यो नाचलाई प्रारम्भ गरेको बंशावलीमा उल्लेख छ ! विभिन्न कारणहरूले गर्दा यो नाच केही समयदेखि केही ठाउँहरूमा बन्द भए पनि गणका नकिं र सदस्यहरू मुक्तिमाया र गणेश देवगण भई नाच्ने गरिएका पनि छन् ! नाच प्रदर्शन गर्न गराउन ८ दिन अघि निम्तोका रूपमा “दिं छु वनेगु” भनेर देवगणहरूलाई निमन्त्रणा गर्दै आगमनको लागि दिन निर्धारण गर्ने प्रचलन रहेको छ ।
धार्मिक कथनअनुसार महिषासुरसँगको संग्राममा नवदुर्गाले विभिन्न ९ प्रकारका रूपहरू धारण गरेका छन् ! नवदुर्गा देवगणमा सिफोद्यः, भैरब, महाकाली, बाराही, ब्रम्हायणी, महेश्वरी, कुमारी, बैष्णवी, इन्द्रायणी, गणेश, महादेव, श्वेतभैरब, सिम्ह (सिम्बः), दुम्ह (दुम्बः), खिँबाजा, तः बाजा, कामँ बाजा, महापात्र, नकिँ सम्मिलित हुन्छन् । यस नवदुर्गा ‘ङालाकेगु नाच’मा विशेषतः दुम्बः र स्वेत भैरबको विशेष भूमिका रहेको पाइन्छ ।
नवदुर्गा नाचको लागि ब्रम्हकुण्डलस्थित खोलाको किनारमा पाइने कालो माटोबाट मुकुण्डो बनाउने परम्परा रहेको छ ! कालो माटो धुलो बनाएर कालो मास एवं मैदाको माड कपाससहित विभिन्न शुद्ध सामाग्रीहरू मुछेर मुकुण्डो तयार गरिन्छ । नवदुर्गा नाचमा महादेव, गणेश, त्रिपुरासुन्दरी, सिम्बः, बम्हायणी, महेश्वरी, कुमारी, भद्रकाली, बाराही, इन्द्रायणी, महाकाली, दुम्बः र श्वेत भैरब गरी १३ देवगणको मुकुण्डो बनाएर नाच नाच्ने गरिन्छ ।
जात्रा अवधिभर विभिन्न हाउभाउ प्रस्तुत गर्दै थरिथरीका रसरंगहरूसहित विविध नाचहरू प्रदर्शन गर्ने गरिन्छ । विशेषतः मुख्य नाचहरू यसप्रकार छन् :
प्रारम्भिक नाच :
प्रारम्भिक नाच भैरबनाथ देवताबाट सुरु हुन्छ र क्रमशः दुई घण्टाको समयमा सम्पूर्ण देवगणहरूको नाच प्रदर्शन गरिन्छ । गीतको बोल र बाजाको तालसँगै पारिवारिक रहनसहन, अभिभावकको भूमिका, चेलिबेटीको दुःख, शाकाहारी, मांसाहारी जस्ता विषयवस्तुहरूमा नाच प्रदर्शन गरिन्छ । भैरब नाच देवताको मूल नाइकेको रूपमा देखिन्छ । भैररूको बाहुलीबाट पूजा गर्ने, बलि दिने देवगणहरूलाई प्रसाद बाँडेर दिने देखाइन्छ । बलिको रूपमा गुठी संस्थानबाट उपलब्ध गराइएका समयबजिका साथ पूजा गरी मू बाहाँ (मूल बहान) लखेट्ने परम्परा रहेको छ । बाहिर चौरमा मू बाहाँलाई छोडेर ‘लियो लियो पायो पायो’ भन्दै मू बाहाँ लखेट्ने गरिन्छ । त्यसपछि मूल देवता (सिफोद्यः) अगाडि पूजा गर्दै मू बाहाँ बली दिने गरिन्छ । मध्यरातमा क्रमशः भैरब, काली, गणेशको नाच हुन्छ ।
धान रोपाइँ नाच :
ब्रम्हाायणी, महेश्वरी, कुमारी र भद्रकाली (बिष्णुदेवी) देवी देवताहरूको धान रोपाइँ नाच देखाइन्छ ।
ब्रम्हायणीलाई नवदुर्गाको श्रृष्टिकर्ताको रूपमा लिइन्छ । पूजाआजामा सर्वप्रथम जन्मदाता ब्रम्हायणी माताको नाचबाट सुरु हुन्छ । दशैँको जात्रा पनि ब्रम्हायणी पीठबाट सुरु हुन्छ । किम्बदन्तीअनुसार प्राचीनकालमा सुडालको ठूलो जङ्गलको ब्रम्हायणी टोलबाट यस नवदुर्गा श्रृष्टि भएको भनाई छ ।
कुमारीले नवदुर्गा गणभित्र चेलीबेटीको भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । परिवारजनमा चेलीले गरिरहेको व्यावहार यस नाचमा प्रदर्शित हुन्छ । परिवारमा खाना बाँडेर दिने, सरसफाई गर्ने, श्रृंगारहरू गर्ने जस्ता सम्पूर्ण कार्य कुमारी देवीलाई जिम्मेवारी सुम्पेको देखिन्छ । अरूलाई बाँडेर खुशी हुने कुमारीलाई भैरबले कुनै बेला खाली भएको पात्र दिँदा चित्त दुखाई विलाप गरी कुमारी तुलेगु (कुमारी विलाप) समेत यस नाचमा प्रदर्शन हुन्छ । साथै कुमारीलाई विद्याकी देवी वा सरस्वतीको रूपमा पनि लिइन्छ ।
भद्रकाली (बिष्णुदेवी) कृषि कार्यमा प्रतिकको रूपमा देखाइन्छ । कुनै पनि प्राणी बाँच्नको निम्ति खानपानको आवश्यक पर्छ भन्ने भावार्थ यो नाचमा प्रस्तुत गरिन्छ ।
नवदुर्गा गणमा महेश्वरी देवीलाई मात्र शाकाहारी देवीको रूपमा प्रस्तुत गरिएका छन् । सेतो रंग शान्तिको प्रतिक स्वरूप यिनलाई गङ्गाजस्तो पवित्र भएर छुट्टै पहिचान भएकी देवीको रूपमा मानिएको छन् ।
बाराही नाच :
बाराही देवता घरको महिला भूमिका विशेषबारे नाच प्रदर्शन गरिन्छ ! सानैदेखिको बेल विवाह, गुफा राख्ने, सूर्यदर्शन (बार्‍हा पिकायेगु), बुहारीमा हुनुपर्ने व्यावहारिक ज्ञान आदि गतिविधिहरू प्रदर्शन गरिन्छ । बुहारीले सासुलाई गर्नुपर्ने आदर, सम्मान र शिष्टता आदि बाराही नाचमा प्रदर्शन गरिन्छ । साथै घरपरिवार नारीबाट नेतृत्व निभाउनुपर्ने व्यावहार पनि यसै नाचमा प्रदर्शन गरिन्छ ।
माछा मार्ने जात्रा :
सिम्ह दुम्हको माछा मार्ने नाच देखाइन्छ ! सिम्ह दुम्हको प्रतिकको रूपमा भीमसेन र द्रौपतिको रूपमा बाराही र कुमारी जोडीको रूपमा रहेका हुन्छन् । यस नाचमा दुम्ह पात्रले बालबालिकाहरूका गतिविधिहरू देखाइन्छ । दुम्हले भीमसेनको रूपमा भूमिका निभाउँछ । सिम्ह देवीले बालबालिकाहरूका क्रियाकलाप प्रदर्शन गर्ने गर्छ ! जात्रा हुँदा बाटोमा पैसा मागिरहने सिम्ह द्रौपदी देवीको भूमिका निभाउने गरिन्छ ! श्रीमान् श्रीमतीबीच हुने दाम्पत्य जीवनमा हुनुपर्ने सदाचार सिम्ह–दुम्ह ‘ङा’ लाकेगु जात्राबाट प्रदर्शन गरिन्छ ।
महाकाली नाच :
महिषासुर दानव, नारीको क्रोध र सन्दर्भमा युद्धको भूमिका, तरवार नाच, पातालको नाच र तीन नेत्रको क्रोध नाच देखाइन्छ । महाकालीलाई यस देवगणमा सबैभन्दा क्रोधी देवीको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । यस नाचमा नारीहरूको क्रोधबाट महिषासुरलाई स्वर्ग र पातालबाट खोजेर आफ्नो हतियारबाट वध गरेको नाच प्रदर्शन गरिन्छ । कुनै पनि जात्रामा आफूले कुनै बली नपाउँदा रिसाई फर्कने देवीको रूपमा देखाइन्छ । भैरबको अनुपस्थितिमा महाकाली देवीबाट पनि कार्य सञ्चालन हुन्छ भन्ने देखाइन्छ ।
श्वेत भैरबको खास्टो लुट्ने नाच :
मानव जीवनमा सरसफाई, महिलाहरूको श्रृङ्गार गर्ने विषयमा आधारित नाच देखाइन्छ ! महाकालीले महिषासुरको बध गरी सकेपछि रगताम्य महाकाली देवी आफ्नो वस्त्र सफा गरी रहेको बेला स्वेत भैरब भने सुन्दर नारीको नग्न शरीर हेर्दै जिस्किरहेको थिए ! आफूलाई लुकी छिपी हेरेर जिस्काएपछि महाकाली स्वेत भैरबसँग क्रोधित हुन्छ र स्वेत भैरबको खास्टो लुटेर लिन्छ ! भैरबले जति फकाए पनि महाकाली खास्टो फर्काउन मान्दै मान्दैन ! यस नाचमा श्वेत भैरबको खास्टो लुट्ने (गा त्वःकेगु) नाच प्रदर्शन देखाइन्छ ।
खास्तो फिर्ता लिने नाच :
महाकालीलाई मनाउन भैरब बाटो–बाटोमा पैसा उठाउन थाल्छ र पैसा चढाएर मनाउन खोज्छ । क्रोधित महाकाली मान्दैन र भाले कुखुरा खाने इच्छा प्रकट गर्छ ! भैरबले त्यही पैसाले भाले कुखुरा किनेर महाकालीलाई चढाउँछ ! महाकालीले मुखबाट भालेको टाउको छुट्याई बली लिन्छ र भैरबले आफ्नो खास्टो फिर्ता पाउँछ ! यस कथालाई जीवन्त दिँदै नाच प्रदर्शन गरिन्छ । सिम्ह दुम्ह बालकुमारी स्वेत भैरब र महाकालीबीच विशेष पूजा गरी श्वेत भैरबको नाच देखाइन्छ ।
माछा मार्न शिक्षा दिने नाच :
सिम्ह दुम्ह आफ्नो मित छोरालाई शिक्षा दिई माछा मार्ने जात्रा सुरु गर्न पानी फाल्ने नाच देखाइन्छ । सिम्ह दुम्हको स–साना केटाकेटीपनको चकचके नाच जिद्दिपन ठूलाबडासँग जिस्किने नाच प्रदर्शन गरिन्छ । पछि श्वेत भैरबबाट माछा मार्ने जात्रा सुरु गर्न माछा राखेको बाँसको ढक्की बोक्दै माछा मार्ने जात्रा गरिन्छ । माछा मारेर मित छोराहरूलाई अगाडि बोलाई आफू एक्लैले मात्र माछा खान्छ र माछा खाने भाषाको बोलमा सिम्हले सराप दिने गर्छ ।
श्वेत भैरबको पेट दुख्ने नाच :
श्वेत भैरबको पेट दुखेको नाच देखाइन्छ । छट्पटिरहेको बेला मित छोराहरू सिम्ह दुम्हकै सहयोगबाट क्षमा मागी आफ्नी श्रीमती बालकुमारी (इन्द्रायणी) बोलाई अक्षता (जाकि ह्वयेकेगु) गर्ने गराइन्छ र निको हुने नाच देखाइन्छ ! यसपछि श्वेत भैरब र इन्द्रायणीको मतिना (प्रेम) नाच प्रदर्शन गरिन्छ । आफ्नो लुगा धुन सिम्ह दुम्हको सहयोग मागिन्छ । लुगा धोइदिन्छु भनेर लिन्छन् र फालिदिन्छन् ! लुगा फाल्ने, जिस्क्याउने बानीबाट दिक्क भई मित छोराछोरीलाई गाली गरी आफैँले लुगा धुने नाच प्रदर्शन गरिन्छ ।
समापन नाच :
श्वेत भैरबको छोटो नाच देखाइन्छ र माछा मार्ने जात्रा सम्पन्न गरिन्छ ।
त्यसलगत्तै पूर्ण सम्पूर्ण देवगणहरू अन्तिम देवगण नाच प्रदर्शन गरी स्थानीयबासीका हर्ष उल्लासका साथ बाजागाजा अगाडि राखेर जय काली ! जय बाराही ! लगायत नाराका साथै धुप, अगरबत्ति बाली देवगण मन्दिरसम्म पुर्‍याउने चलन छ ।
श्रोत : नाचको सार माननीय श्री नारायणमान बिजुक्छेको लेखबाट ।
धर्मग्रन्थहरूको पौराणिक कथाअनुसार गौतम ऋषि र उनकी श्रीमती अहिल्या पनौतीको त्रिवेणीघाटनजिकै बस्थे । अहिल्याको रूप, सौन्दर्य र यौवनबाट मोहित भएका स्वर्गका राजा इन्द्र एक समय गौतम ऋषिकै भेष धारण गरेर पृथ्वीमा ओर्लिए । समयभन्दा अगावै इन्द्रले भाले बासेको नक्कल गरेपछि सक्कली गौतम ऋषि स्नान गर्न त्रिवेणीघाट गए ।
यही मौकामा छद्मभेषी इन्द्र आश्रममा छिरी ऋषिपत्नी अहिल्यासँग शारीरिक सम्बन्ध बनाए । नदी तटनजिकै पुगेपछि मात्रै आफूले फेर्ने धोती नल्याएको थाहा पाएर सक्कली गौतम ऋषि आश्रम फर्किए । आश्रमको ढोकामा आफ्नै भेषधारी इन्द्रलाई देखेपछि क्रोधित भएका गौतम ऋषिले दुबैलाई श्राप दिए । श्रापको प्रभावका कारण अहिल्या ढुङ्गामा परिणत भइन् । उक्त ढुङ्गा अहिले पनि इन्द्रेश्वर मन्दिरको उत्तरपूर्वी कुनामा अवस्थित छ । श्रापकै कारण राजा इन्द्रको शरीरभर हजारौँ योनी निस्किए ।
कथाअनुसार श्रापपछि लज्जित भएका राजा इन्द्र श्रापमुक्त हुने उपाय खोज्दै आफ्ना गुरु बृहस्पतिको शरणमा पुगे । गुरुको सल्लाहअनुसार राजा इन्द्र मुक्तेश्वर महादेवको १२ वर्षे तपस्यामा बसे । तपस्यापछि प्रसन्न भएका मुक्तेश्वर महादेवले इन्द्रलाई एउटा सुकेको बाँस दिएर भने, “यसलाई टेक्दै यात्रा गर्नु, बाँसमा पालुवा निस्केर जरा हाल्न थालेपछि तिमी योनी मुक्त हुनेछौ ।”
मुक्तेश्वर महादेवको आज्ञाअनुसार पृथ्वीको यात्रामा निस्किएका इन्द्र त्रिवेणीकोनजिक पुगेपछि उनले ढुङ्गामा टेकेको बाँसमा पालुवा आयो र त्यति नै खेर उनको निधारबाहेक शरीरभरी आएका योनी लुप्त भए ।
इन्द्रले ढुङ्गामा बाँस बिसाएकै हुनाले उक्त ठाउँको नाम पनौती रहन गएको विश्वास छ । किनभने, नेपालभाषामा ‘पँ’ भनेको बाँस र ‘ल्होँ’ भनेको ढुङ्गा भन्ने बुझिन्छ । ढुङ्गामा बाँस बिसाउँदा पालुवा आएको हुनाले उक्त ठाउँ ‘पँल्होँ’ हुँदै कालान्तरमा पनौती नामाकरण भएको मानिन्छ ।
निधारको योनी नहटेपछि राजा इन्द्र पनौतीनजिकै रहेको भालेश्वर महादेवको १२ वर्षे तपस्यामा बसेको धार्मिक मान्यता छ । यस तपस्यापछि भालेश्वर महादेवले इन्द्रको निधारमा रहेको योनीलाई आँखामा प्रमाणित गरिदिए । भालेश्वर महादेवलाई अहिले पनि पनौतीमा देख्न सकिन्छ । त्यही बेलादेखि संसारका सबै हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका निम्ति तेश्रो आँखा भएका इन्द्रको पूजा महत्वको विषय रहँदै आएको छ । जसको ऐतिहासिकता पनौतीसँग जोडिएको छ ।
इन्द्रले जुन ढुङ्गामा बाँस टेकाउँदा पालुवा पलायो, त्यही स्थानमा महादेवको मूर्ति पनि स्थापना गरेका थिए । इन्द्रले स्थापना गरेको उक्त महादेवको मूर्ति इन्द्रेश्वर महादेवका नामले अहिलेसम्म परिचित छ । उक्त स्थानमा अहिले रहेको मन्दिर भने ईश्वीको १३ औं शताब्दीमा राजा जयसिंहराम मल्लले बनाएका हुन् । यही इन्द्रेश्वर महादेवको मन्दिर नेपालकै सबैभन्दा पुरानो मन्दिर मान्न सकिन्छ । अहिले पनि उक्त मन्दिर १३ औं शताब्दीकै स्वरूपमा छ । समयका हिसाबले चाँगुनारायण र पशुपति सबैभन्दा पुराना धार्मिक स्थल हुन् । तर, ती दुबै स्थानमा मन्दिरको अहिलेको स्वरूप भने क्रमशः १४औं र १५ औं शताब्दीमा बनेका हुन् ।
By Maheswor Maharjan at March 20, 2017 No comments:
By Maheswor Maharjan at March 20, 2017 1 comment:
गुरुमापालाई टुंडीखेलमा टन्न मासु भात खुवाउँदै !!
केशचन्द्र, काठमाडौको इतुंबहाल निवासी, जुवामा आफ्नो सबै सम्पति हारेपछि, आफ्नै बहिनीसंग बस्न थाले ! बहिनीको घरमा खाना खान दिएको प्लेट समेत जुवा खेल्दै हार्न थालेपछि बहिनीले केशचन्द्रलाई भुइमा खाना राखेर खुवाउन थालिन !
बहिनीको यो ब्यबहारले चित्त दुखेर भुइको खाना सबै रुमालमा पोको पार्दै काठमाडौ शहर बाट टाढा हिडे ! भोकाएका केशचन्द्र खाना खानको लागि रुमालको पोको फुकाले, सबै खाना बासी भएर बिग्री सकेको थियो !
भोकाएका केशचन्द्र खानालाई फिजाएर घाममा सुकाउन थाले र आफु एकछिन आराम गर्न थाले ! जब बिउझियो, घाममा सुकाएका सबै खानाहरु परेवाले खाँदै थिए ! भोकाएका केशचन्द्र सारै दु:खि र उदास भए र आँशु झार्न थाले ! उसको दु:ख देखेर परेवाहरुले खाएका खानेहरु ओकल्न थाले जुन भकाभक सुनमा परिवर्तन भए ! यति धेरै सुन थुप्रिए कि उसले उचाल्न पनि सकेन ! सुनको थुप्रोलाई के गर्ने कसो गर्ने सोचि रहेको बेला एक्कासि जंगलमा बस्ने मान्छे खाने गुरुमापा गन्ध सुघ्दै आफुतिर आइरहेको देखे !
केशचन्द्रले मायायापुर्वक गुरुमापालाई मामा सम्बोधन गर्दै बोलाए र थुप्रेको सुन घरसम्म बोकेर पुरयाई दिन अनुरोध गरे ! बदलामा घर पुगेपछि टन्न भोजन गराउने र शहरका बाबुआमाले आफ्ना छोरा छोरीहरुलाई गाली गर्दै बोलाए ति बच्चाहरुलाई गुरुमापाले लैजान सक्ने अधिकार दिने बचन दिए !
यसरी केशचन्द्रले गुरुमापालाई आफ्नो घर इतुंबहालमा लगे र आफ्नो काम सिद्ध गरे ! टन्न सुन पाएका केश चन्द्रले गुरुमापालाई मायापुर्वक आफैसंग राखे ! अन्तत: जब जब बाबुआमाले आफ्ना छोरा छोरीहरुलाई ..गुरुमापा आउँछ, तिमीलाई लगेर खान्छ भनेर तर्साउन थाले, शहरबाट बच्चाहरु हराउन थाले !
पछि स्थानीय बासीहरुले यो कुरो थाहा पाए ! गुरुमापालाई आफ्नो टोलमा यसरी राख्न नहुने निर्णय गरे ! बार्षिक रुपमा मासु भात खुवाउने प्रतिबद्धता सहित टुँडिखेलमा बस्न बाध्य गराए र गुरुमापालाई शहरबाट निकाले !
फोटो : राजु महर्जन
By Maheswor Maharjan at March 20, 20176comments: